ကုလသမဂ္ဂရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ - အခမဲ့သင်တန်းများရနိုင်သည်။ - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign
ကုလသမဂ္ဂရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ - အခမဲ့သင်တန်းများရနိုင်သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2019 ပညာရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများ / အစီအစဉ်များ, သတင်းနှင့်အထူးများ 0
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - humanrightscareers.com)
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကုလသမဂ္ဂမှအတည်ပြုထားသောရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များသည်ရည်မှန်းချက် (၁၇) ခုဖြစ်ပြီးရည်မှန်းချက် (၁၆၉) ခုကိုကုလသမဂ္ဂမှ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် မှစတင်၍ ပြည်သူလူထု၏ရေရှည်တည်တံ့သောအပြောင်းအလဲနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းချက် (၁၆၉) ခုရှိသည်။ Planet ကို, စည်းစိမ်ချမ်းသာ, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မိတ်ဖက်။ ဤရည်မှန်းချက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်စာတတ်မြောက်ရေး၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေး၊ ပညာရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သုခချမ်းသာ။ ဤရည်မှန်းချက်များမှာထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည့်ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်ကုလသမဂ္ဂသတ်မှတ်ထားသောအဓိကကဏ္ areas သုံးခုကို ဦး တည်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
အဆိုပါ SDG Initiative
SDGs များအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအပြင်၊ တက္ကသိုလ် ၁၇ ခုသည်ကျောင်းသားများအား SDGs အကြောင်းနှင့်၎င်းတို့မည်သို့ရရှိနိုင်ရန်မည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုပညာပေးရန်အစပြုခဲ့သည်။ Coursera သည်ဤသင်တန်းများကိုအများပြည်သူအတွက်အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းပုံစံဖြင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းရည်မှန်းချက်များပြည့်မှီစေရန်လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုတိုးများလာမည်။ ဤသင်တန်းများသည်မကြာခဏဆိုသလို NGO သို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းမှတဆင့် SDGs အောင်မြင်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်လက်ကမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ ပါ ၀ င်နေသောတက္ကသိုလ်များကဤရည်မှန်းချက်များနှင့်ပါ ၀ င်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးကမ်းလှမ်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကမ်းလှမ်းသော SDGs နှင့်သင်တန်းများ
SDGs သည်ရည်မှန်းချက် ၁၇ ခုဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းရည်မှန်းချက် ၁၆၉ ခုပါဝင်ပြီး ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရရှိရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ထိုရည်မှန်းချက်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့သောစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆီသို့ ဦး တည်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်များနှင့်၎င်းတို့ကိုရရှိရန်တိုးတက်မှုများကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ဖတ်ရှုနိုင်သည် https://sustainabledevelopment.un.org။ SDG အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်ပေးသောသင်တန်းများသည် Massive Open Online Courses (MOOCs) မှတဆင့်ရည်မှန်းချက်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ ပါဝင်သည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိ (ရည်မှန်းချက် ၁)
ရည်မှန်းချက် ၁- ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိ - နေရာတိုင်းရှိဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအားလုံးကိုပုံစံမျိုးစုံဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။ ဤရည်မှန်းချက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မှာ ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုဖယ်ရှားရန် (တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၁.၂၅ အောက်နေထိုင်သောလူများကသတ်မှတ်ထားသည်) နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုအတွင်းနေထိုင်သောအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များကိုအနည်းဆုံးထက်ဝက်လျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအတွက်တန်းတူညီမျှစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးလက်လှမ်းမီမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သေချာစေရန်နှင့်ရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်အခြားရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကဲ့သို့သောအခြေအနေများမှဆင်းရဲသူများ၏အားနည်းချက်များကိုလျှော့ချခြင်းအပါအ ၀ င်လူအားလုံးအတွက်လူမှုကာကွယ်မှုနှင့်အစီအမံများကိုလည်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။
SDG 1 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
Leiden တက္ကသိုလ် (SDG ပါတနာစီမံကိန်း)
​စီမံကိန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတူလက်တွဲကွဲပြားခြားနား Done ။ ပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူများအနေဖြင့် (ဒေသဆိုင်ရာ) အန်ဂျီအိုတစ်ခုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ထိရောက်သောတိုးတက်မှုများကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။
ထိုင်ဝမ်တက္ကသိုလ် (SDG Partner Project)
စီမံကိန်း Wဒေသခံထိုင်ဝမ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် orking ။ စီမံကိန်း၏ရည်မှန်းချက်မှာကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - သင်တန်းသည်တရုတ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သည်
ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်: ကလေးများ၏လူ့အခွင့်အရေး - စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနိဒါန်း
အော်လိုတက္ကသိုလ် အဘယ်အရာအလုပ်လုပ်သည်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာကောင်းများ
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်: ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်များတွင်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများ
ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်: ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ - အနာဂတ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊
KU Leuven- ကုလသမဂ္ဂရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ
သုညဆာလောင်မှု (ရည်မှန်းချက် ၂)
ရည်မှန်းချက် ၂- သုညအငတ်ဘေး - ငတ်မွတ်မှုအဆုံးသတ်ခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုရရှိစေရန်နှင့်အာဟာရတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း။ ဤရည်မှန်းချက်သည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလူတိုင်းအတွက်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးကင်းစေရန်နှင့်အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ငါးနှစ်အောက်ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အာဟာရချို့တဲ့မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ။ အသေးစားလယ်သမား / ထုတ်လုပ်သူများအတွက်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ၀ င်ငွေကိုနှစ်ဆတိုးစေရန်၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုသေချာစေရန်နှင့်မျိုးစေ့များ၊ အပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များတွင်မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မျှော်လင့်သည်။
SDG2တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
စာဖတ်တက္ကသိုလ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Hungry Planet: စိုက်ပျိုးရေး၊ ပြည်သူနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး
Leiden တက္ကသိုလ် (NeoLMS) ဝေးလံသောအစားအစာလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး
ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာ (ရည်မှန်းချက် ၃)
ရည်မှန်းချက် ၃- ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာ ကျန်းမာသောဘဝကိုရရှိစေရန်နှင့်အသက်အရွယ်မရွေးလူတိုင်းအတွက်သုခချမ်းသာကိုမြှင့်တင်ပေးရန်။ ဤရည်မှန်းချက်အားဖြင့်မိခင်သေဆုံးမှုနှုန်းကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်၊ ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်များနှင့်ကလေးငယ်များအတွက်ကာကွယ်နိုင်သောသေဆုံးမှုများကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့် AIDs၊ ငှက်ဖျား၊ တီဘီ၊ အပူပိုင်းဒေသရောဂါများ၊ အသည်းရောင်အသားဝါဘီ၊ နှင့်အခြားကူးစက်ရောဂါများ။ ကူးစက်ရောဂါများမှအချိန်မတန်မီသေဆုံးမှုကိုလျှော့ချရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်ယာဉ်မတော်တဆမှုများကြောင့်သေဆုံးမှုနှင့်ဒဏ်ရာအရေအတွက်ကိုထက်ဝက်လျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ဤရည်မှန်းချက်သည်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီမှုကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလွှမ်းခြုံမှုရရှိစေရန်နှင့်လေ၊ ရေနှင့်မြေဆီလွှာရှိအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများကြောင့်သေဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
SDG3တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
စီမံကိန်း သတိတရား၏အသိအမြင်ပျံ့နှံ့စေရန်အမှန်တကယ်ဘဝစီမံကိန်းကိုဖန်တီးရန်သင့်အားစိန်ခေါ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းနှင့်အတူပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်တယ် အောက်စ်ဖို့သတိစင်တာနှင့်စီမံကိန်းဥပမာတို့ပါဝင်သည် သတိရဥယျာဉ်တော် Leiden တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်စင်တာ အတူတကွဒေသခံဟိဂ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ
ကိပ်တောင်းတက္ကသိုလ်: အဖွဲ့အစည်းမှလှူဒါန်းခြင်း - သေခြင်းမှဘဝသို့
ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်: ဆီးချိုရောဂါ - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ; ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမိတ်ဆက်
ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်: လူ့ - တိရိစ္ဆာန် - ဂေဟစနစ်မျက်နှာပြင်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး; အီဘိုလာ: vaincre ensemble!; Zika ၏ခြေရာနင်း ... မသိသောချဉ်းကပ်; ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး: တစ် interdisciplinary ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
မန်ချက်စတာတက္ကသိုလ် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိရေပေးဝေရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးမူဝါဒအပိုင်း ၁ - ရှုပ်ထွေးသောပြProbleနာများကိုနားလည်ခြင်း; ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများရှိရေပေးဝေရေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးမူဝါဒအပိုင်း ၂
Utrecht တက္ကသိုလ်: အီဘိုလာ - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသိပညာ
အရည်အသွေးပညာရေး (ရည်မှန်းချက် ၄)
ရည်မှန်းချက် ၄- အရည်အသွေးရှိသောပညာရေး အားလုံးပါ ၀ င်သောသင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကိုမြှင့်တင်ပေးရန်အားလုံးပါ ၀ င်ပြီးတန်းတူညီမျှသောအရည်အသွေးရှိသောပညာရေးကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ဤရည်မှန်းချက်၏ပထမ ဦး ဆုံးရည်မှန်းချက်မှာကလေးသူငယ်အားလုံးသည်အခမဲ့၊ သာတူညီမျှရှိပြီးအရည်အသွေးပြည့်ဝသောမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းပညာရေးကိုပြည့်မှီစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်သည်ကလေးများအားလုံးအတွက်အရည်အသွေးပြည့်မီသောအစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှုရရှိစေရန်၊ လူအားလုံးအတွက်တတ်နိုင်သောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းသင်တန်း (တက္ကသိုလ်အပါအ ၀ င်) ရရှိရန်နှင့်အလုပ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိသောလူငယ်များနှင့်လူကြီးများတိုးမြှင့်ခြင်းကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာပညာရေးတွင်ကျား၊ ထို့အပြင်သင်ယူသူအားလုံးသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မသန်စွမ်းမှုများအပါအ ၀ င်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုလုံခြုံစိတ်ချနိုင်သည့်ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ရန်အတွက်သင်ယူသူအားလုံးသည်ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
SDG4တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
McMaster တက္ကသိုလ်: မင်းတုန်းမင်း; တိုးတက်မှုများအတွက်စမ်းသပ်ချက်
ယူနီဆက်: လူမှုရေးစံနှုန်းများ, လူမှုရေးပြောင်းလဲမှု
ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှု (ရည်မှန်းချက် ၅)
ရည်မှန်းချက် ၅ - ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှု - ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကိုရရှိရန်နှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရန်။ ဤရည်မှန်းချက်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်၊ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ကလေးသူငယ်လက်ထပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းစသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအပေါ်အန္တရာယ်ရှိသောအလေ့အကျင့်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်။ ၎င်းသည်အခကြေးငွေမပေးသည့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အိမ်တွင်းအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်အများပြည်သူအဆင့်အားလုံး၌အမျိုးသမီးများအပြည့်အဝနှင့်ထိရောက်သောပါ ၀ င်မှုသေချာစေရန်နှင့်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို universal access ရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။
SDG5တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
Macquarie တက္ကသိုလ်: Big History - မတူကွဲပြားမှုနှင့်ပါဝင်
သန့်ရှင်းသောရေနှင့်မိလ္လာစနစ် (ရည်မှန်းချက် ၆)
ပန်းတိုင် ၆- သန့်ရှင်းသောရေနှင့်မိလ္လာ - လူအားလုံးအတွက်ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှုရရှိနိုင်မှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစီမံခန့်ခွဲမှုသေချာစေရန်။ ဤရည်မှန်းချက်သည်လူအားလုံးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောစျေးနှုန်းချိုသာသောသောက်သုံးရေရရှိရန်နှင့်လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်သောသန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှုရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရေအသုံးပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ရေအရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ဤရည်မှန်းချက်အားဖြင့်သူတို့သည်ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ရေနှင့်သက်ဆိုင်သောဂေဟစနစ်များအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ကိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်။
SDG6တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်: ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မူဝါဒ; Droit International de l'Eau Douce; ကလေးများ၏လူ့အခွင့်အရေး - စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနိဒါန်း; ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ - စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းလမ်း; ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေး: တစ်ခု Interdisciplinary ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
စျေးသက်သာပြီးသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင် (Goal 7)
ရည်မှန်းချက် ၇- တတ်နိုင်ပြီးသန့်ရှင်းသောစွမ်းအင် - အားလုံးအတွက်တတ်နိုင်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ဤရည်မှန်းချက်သည်လူအားလုံးအားတတ်နိုင်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ခေတ်မီစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ရရှိစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်သုတေသနနှင့်နည်းပညာရရှိရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်နည်းပညာတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုတိုးတက်မှုနှုန်းကိုနှစ်ဆတိုးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
SDG7တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်: ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မူဝါဒ; Droit International de l'Eau Douce
လျောက်ပတ်သောအလုပ်နှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု (ရည်မှန်းချက် ၈)
ရည်မှန်းချက် ၈— ကောင်းမွန်သောအလုပ်နှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်အားလုံးပါ ၀ င်သောရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဤရည်မှန်းချက်သည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများတွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ပြည်တွင်းစုစုပေါင်းထုတ်ကုန်များတိုးပွားလာစေရန်ဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားမှုများ၊ နည်းပညာအဆင့်မြှင့်မှုများနှင့်အခြားအရာများမှတဆင့်နိုင်ငံများအနေဖြင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားသောစီးပွားရေးကုန်ထုတ်စွမ်းအားများရရှိရန်ကူညီခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ လျောက်ပတ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့သည်စားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကိုထိရောက်စွာမြှင့်တင်ရန်၊ အပြည့်အဝနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နှင့်လူတိုင်းအတွက်လျောက်ပတ်သောအလုပ်ကိုရရှိရန်နှင့်အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးတွင်မပါ ၀ င်သည့်လူငယ်အရေအတွက်ကိုလျှော့ချလိုကြသည်။ ဤရည်မှန်းချက်အားဖြင့်သူတို့သည်အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှု၊ ခေတ်သစ်ကျွန်စနစ်နှင့်လူကုန်ကူးမှုများကိုအမြစ်ပြတ်တိုက်ဖျက်နိုင်ရေး၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောအလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်များကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်၊
SDG 8 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
Cape Town တက္ကသိုလ် (SDG Partner Project)
Changemaker တစ်ခုဖြစ်လာခြင်း - လူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
စီမံကိန်း နှင့်ပူးပေါင်း ဓာတ်ပြားများ။ ပါ ၀ င်သူများသည်လူမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု (သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖန်တီးရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။
McMaster တက္ကသိုလ်: လူတိုင်းအတွက်ဘဏ္:ာရေး - ဆုံးဖြတ်ချက်များ; လူတိုင်းအတွက်ဘဏ္ာရေး - ဈေးကွက်များ; လူတိုင်းအတွက်ဘဏ္ာရေး - တန်ဖိုး; လူတိုင်း၏ဘဏ္:ာရေး: အကြွေး
စက်မှု၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ (ရည်မှန်းချက် ၉)
ရည်မှန်းချက် ၉ - စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ - ဒဏ်ခံနိုင်သောအခြေခံအဆောက်အအုံများကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဤရည်မှန်းချက်သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လူသားတို့၏သုခချမ်းသာကိုပံ့ပိုးရန်နှင့်အားလုံးပါ ၀ င်ပြီးရေရှည်တည်တံ့သောစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်အခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးမြှင့်တိုးတက်စေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ ရည်မှန်းချက်မှာအသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းသောနည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးပြုမှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သုတေသန၊
SDG9တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
လျှော့ချမညီမျှမှု (ရည်မှန်းချက် 10)
ရည်မှန်းချက် ၁၀ - မညီမျှမှုကိုလျှော့ချခြင်း - နိုင်ငံများအတွင်းနှင့်နိုင်ငံအတွင်းမညီမျှမှုကိုလျှော့ချပါ။ ဤရည်မှန်းချက်သည်လူ ဦး ရေ၏အောက်ခြေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၏ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်းအပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါ ၀ င်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ တန်းတူအခွင့်အလမ်းများကိုသေချာစေခြင်းနှင့်ဥပဒေပြုရေးနှင့်မူဝါဒများတွင်မညီမျှမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ ရည်မှန်းချက်မှာကမ္ဘာ့ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ကမ္ဘာ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကိုယ်စားပြုမှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊
SDG 10 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
စီမံကိန်းWဒေသခံထိုင်ဝမ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် orking ။ စီမံကိန်း၏ရည်မှန်းချက်မှာကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - သင်တန်းသည်တရုတ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်သည်
လန်ဒန်တက္ကသိုလ်က: Global Diplomacy - ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့သံတမန်ရေးရာ
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောမြို့ကြီးများနှင့်လူထုများ (ပန်းတိုင် ၁၁)
ရည်မှန်းချက် ၁၁ - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောမြို့ကြီးများနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း - မြို့များနှင့်လူနေအိမ်ရာများအားအားလုံးပါ ၀ င်မှု၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ဤရည်မှန်းချက်၏ရည်မှန်းချက်နယ်ပယ်သည်လူတိုင်းအတွက်လုံခြုံ။ စျေးနှုန်းချိုသာသောအိမ်ရာကိုရရှိရန်၊ လူတိုင်းအတွက်လုံခြုံ။ စျေးနှုန်းချိုသာသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုရရှိရန်နှင့်အားလုံးပါ ၀ င်ပြီးရေရှည်တည်တံ့သောမြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ်များကိုကာကွယ်ရန်၊ သေဆုံးမှုအရေအတွက်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သောစီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုများလျှော့ချရန်နှင့်မြို့များအားလေထုအရည်အသွေးနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှဆိုးရွားသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများလျှော့ချရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်လုံခြုံပြီးအားလုံးပါ ၀ င်သည့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးနေရာများသို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
SDG 11 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
Lund တက္ကသိုလ် (SDG မိတ်ဖက်စီမံကိန်း)
စီးပွားရေးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး - ရေရှည်တည်တံ့သောမြို့များ
​စီမံကိန်း အတူ ပူးပေါင်း. WWF က နှင့် အိုင်စီလီ.
ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်: ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ - စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းလမ်း
တာဝန်ရှိသောစားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု (ရည်မှန်းချက် ၁၂)
ရည်မှန်းချက် ၁၂ - တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောစားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှု - ရေရှည်တည်တံ့သောစားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများကိုသေချာစေပါ။ ဤရည်မှန်းချက်တွင်ရေရှည်တည်တံ့သောစားသုံးမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ၁၀ နှစ်မူဘောင်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုရေရှည်တည်တံ့သောစီမံခန့်ခွဲမှုရရှိရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားနပ်ရိက္ခာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုထက်ဝက်လျှော့ချရန်၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုရရှိရန်၊ ဤရည်မှန်းချက်သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လူနေမှုပုံစံစသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အသိပညာများတိုးပွားလာစေရန်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်အလုပ်များကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။
SDG 12 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
ကိုပင်ဟေဂင်တက္ကသိုလ်: ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ - အနာဂတ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊​
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း (ရည်မှန်းချက် ၁၃)
ရည်မှန်းချက် ၁၃- ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း - ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ပါ။ ဤရည်မှန်းချက်သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအစီအမံများကိုအမျိုးသားမူဝါဒများနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းအပြင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပညာရေးနှင့်အသိပညာများတိုးတက်စေရေးအပြင်ရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်သောဘေးအန္တရာယ်များနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။
SDG 13 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ် ဇီဝထု ၂ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အနာဂတ်အတွက်သိပ္ပံပညာ
ရေအောက်ရှိဘဝ (ရည်မှန်းချက် ၁၄)
ရည်မှန်းချက် 14 — ရေအောက်ရှိဘဝ - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သမုဒ္ဒရာ၊ ပင်လယ်၊ ဤရည်မှန်းချက်၏ရည်မှန်းချက်များသည်အဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်း၊ အဏ္ဏဝါနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဂေဟစနစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်သမုဒ္ဒရာအက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အနည်းဆုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသောပင်လယ်နှင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အချို့သောငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကိုအလွန်အကျွံငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံဖမ်းဆီးခြင်းမှတားမြစ်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အဏ္ဏဝါအရင်းအမြစ်များကိုရေရှည်အသုံးချခြင်းဖြင့်အသေးစားကျွန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနှင့်အခြားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များတိုးမြှင့်ပေးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
SDG 14 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
မြေပေါ်အသက်တာ (ရည်မှန်းချက် ၁၅)
ရည်မှန်းချက် ၁၅ - မြေပေါ်တွင်နေထိုင်ခြင်း - ကုန်းတွင်းပိုင်းဂေဟစနစ်များကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအသုံးပြုမှုကိုကာကွယ်ရန်၊ ပြန်လည်တည်ထောင်ရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်၊ သစ်တောများအားရေရှည်တည်တံ့အောင်စီမံခန့်ခွဲရန်၊ သဲကန္တာရများကိုတိုက်ဖျက်ရန်၊ ဤရည်မှန်းချက်သည်ကုန်းတွင်းပိုင်းဂေဟစနစ်များအားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ သစ်တောများအားရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ သဲကန္တာရများကာကွယ်ခြင်းနှင့်တောင်ယာဂေဟစနစ်များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သဘာဝအလျောက်ကျက်စားရာနေရာများပျက်စီးခြင်းကိုလျှော့ချခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇအရင်းအမြစ်များကိုမျှတစွာခွဲဝေသုံးစွဲခြင်း၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောမျိုးစိတ်များအားတရားမဝင်ခိုးယူခြင်းနှင့်လူကုန်ကူးခြင်းများကိုတားဆီးရန်နှင့်မျိုးစိတ်များအားဂေဟစနစ်အမျိုးမျိုးအပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုနှင့်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတားဆီးရန်လည်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဂေဟစနစ်နှင့်ဇီ ၀ မျိုးကွဲများတန်ဖိုးများကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်ပေါင်းစည်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
SDG 15 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့်ခိုင်မာသောအင်စတီကျူးရှင်းများ (ရည်မှန်းချက် ၁၆)
ပန်းတိုင် (၁၆) - ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှုနှင့်ခိုင်မာသည့်အင်စတီကျူးရှင်းများ - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်း။ အားလုံးပါဝင်နိုင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းများကိုမြှင့်တင်ရန်၊ လူတိုင်းအတွက်တရားမျှတမှုကိုလက်လှမ်းမီစေရန်နှင့်အဆင့်အားလုံးရှိထိရောက်သော၊ ဤရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မှာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အကြမ်းဖက်သေဆုံးမှုပုံစံအားလုံးကိုလျှော့ချရန်၊ ကလေးသူငယ်များအားအလွဲသုံးစားမှု၊ လူကုန်ကူးခြင်းနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းများအဆုံးသတ်ရန်နှင့်တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်အဆင့်တိုင်းတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမြှင့်တင်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်တွင်တရား ၀ င်ငွေကြေးနှင့်လက်နက်စီး ၀ င်မှုလျှော့ချခြင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများလျှော့ချခြင်း၊ ထို့အပြင်ဤရည်မှန်းချက်သည်အဆင့်တိုင်းတွင်တုန့်ပြန်မှုရှိခြင်း၊ အားလုံးပါ ၀ င်မှုရှိခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကိုသေချာစေရန်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုတွင်နိုင်ငံများ၏ပါ ၀ င်မှုကိုကျယ်ပြန့်စေရန်၊ တရားဝင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်မွေးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပြည်သူလူထု၏သတင်းအချက်အလက်ကိုရယူသုံးစွဲခွင့်နှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးပမ်းသည် လွတ်လပ်ခွင့်များ။
SDG 16 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
ဂျီနီဗာတက္ကသိုလ်: ကလေးများ၏လူ့အခွင့်အရေး - စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနိဒါန်း; Droit International de l'Eau Douce; ရေအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်မူဝါဒ
Leiden တက္ကသိုလ်: ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမိန့်; အီးယူမူဝါဒနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှု: ဥရောပအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်!; ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း - အာဖရိက၏သမိုင်းကြောင်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်း; ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်ရှိအမွေအနှစ်; အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ (၁) - ဟဂ်ျရှိနိုင်ငံတကာတရားရုံးများနှင့်ခုံရုံးများသို့လမ်းညွှန်; အက်ဥပဒေ ၂ ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ - နိုင်ငံတကာရာဇ ၀ တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့်တရားစွဲဆိုမှု; အဆိုပါ Rooseveltian ရာစု; တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုများ; အကြမ်းဖက်မှုနှင့်တန်ပြန်အကြမ်းဖက်မှု - သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Rutgers တက္ကသိုလ်: တော်လှန်ရေးအတွေးအခေါ်များ - အသုံး ၀ င်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်ခွင့်
Utrecht တက္ကသိုလ်: ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်လူ့အခွင့်အရေး
SDG အကယ်ဒမီ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးနှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေး
ပန်းတိုင်များအတွက်မိတ်ဖက် (ရည်မှန်းချက် 17)
ရည်မှန်းချက် ၁၇ - ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များအတွက်မိတ်ဖက် - ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်အထည်ဖော်မှုနည်းလမ်းများကိုအားကောင်းစေပြီးကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းမိတ်ဖက်များအားပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်း။ ဤရည်မှန်းချက်သည်တိကျသောဘဏ္financeာရေး၊ နည်းပညာ၊ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး၊ ဘဏ္theာရေးကဏ္တွင်ဤရည်မှန်းချက်သည်ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုအားဖြည့်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများကိုအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့နှင့်တိုးမြှင့်ရေးတို့အတွက်လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ နည်းပညာအတွက်ရည်မှန်းချက်သည်ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကိုလက်လှမ်းမီစေခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာများမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်နည်းပညာနှင့်စွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းရည်မှန်းချက်သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာ၏ပံ့ပိုးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကုန်သွယ်မှုန်းကျင်၌ဤရည်မှန်းချက်သည်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှတဆင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အားလုံးပါ ၀ င်သောကုန်သွယ်မှုစနစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့တင်ပို့မှုတိုးမြှင့်ရန်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်အခွန်လွတ် / ခွဲတမ်းစျေးကွက်လက်လှမ်းမီစေရန်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။ မူဝါဒနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဟုလည်းလူသိများသည့်စနစ်ကျသောပြissuesနာများအတွက်ရည်မှန်းချက်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမက်ခရိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ မူဝါဒဆိုင်ရာညီညွတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ တစ် ဦး ချင်းနိုင်ငံများ၏ ဦး ဆောင်မှုနှင့်မူဝါဒများကိုလေးစားခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှစွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုအတွက်ထောက်ခံအားပေးမှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတိုင်းတာမှုများကို ဦး တည်သည့်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ။
SDG 17 တွင်ရရှိနိုင်သည့် MOOCs:
အရီဇိုးနားတက္ကသိုလ် (SDG Partner Project)
အဆိုပါ Orbital အမြင်
စီမံကိန်း Earthrise-2068 ဖြစ်သည် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်နေ့စဉ်နိုင်ငံသားများကိုအပြုသဘောဆောင်သောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်၎င်းကိုအောင်မြင်စေရန်အတူတကွစုစည်းပေးသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာကာသမှကမ္ဘာကိုပထမဆုံးကြည့်ရှုသည့်နှစ် ၅၀ နှင့် ၁၀၀ နှစ်လည်လည်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤစီမံကိန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာရှုမြင်နိုင်သည့်ကမ္ဘာချီစနစ်များကိုချဉ်းကပ်ရန်အားပေးလိမ့်မည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။
၂၀၂၀-၂၀၁၁ သုတေသနအဖွဲ့သို့လာရောက်လည်ပတ်သော Kroc Institute
နိုဝင်ဘာလ 30, 2015 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
စစ်တပ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှုကိုသင်မသိသောအချက်အလက်များ။ # cop21 #DisarmForOurPlanet ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဗျူရိုသို့သွားပါ။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
မတ်လ 28, 2017 ပေါ်လစီ, သုတေသန 1
ONE ၏“ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုသည်လိင်အရအခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာ” သည်မိန်းကလေးများ၏ပညာရေးပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်မိန်းကလေးများကိုပညာပေးရန်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ကြောင်းပြသရန်ရည်ရွယ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2017 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0